ကမ္ဘာကြီး လုံးနေလို့သာ တော်တော့တယ်...
နံပြားလိုသာ အပြားကြီးဆိုရင် ပဲ့ပဲ့ကျတာနဲ့ ခုဆို တစတောင် ကျန်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး-လို့ တွေးမိပါရဲ့...
မကေ့ စိတ်ကူးတွေနောက် လျှောက်လိုက်ရတာ မောတယ်ဗျာ...
တခါတလေလည်း စမ်းကလေးတွေ ညင်ညင်သာသာ စီးဆင်း... ငှက်ကလေးတွေ တေးသီချင်း ဆိုငြည်းနေတဲ့ ဧဒင် ဥယျာဉ်ထဲမှာပဲ လူတွေ နေနိုင်ခဲ့ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်...
ကေ့ ဆီကို ဒါတွေကြောင့်လာနေမိတာ။
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ တော်ပြီကွာ.. ခေါင်းစားတယ်။ ဆံပင် အမဲ က..သိပ်မကျန်တော့ပါဘူး ဆိုမှ.. လို့ ကေ ရွတ်သလို ရွတ်ရမလား။
တို့တော့ သိုးနဲ့တူနေပြီလို့ ထင်မိတာပါပဲ ချစ်တဲ့ ကေ။
မမှီမကမ်းစာတွေကိုဖတ်ရင်းနဲ့ အပေါ်က ဦးငယ်ပြောသလို မောသွားပါတယ်..။ ဒီလိုဖတ်ခွင့်ရတာကိုပဲ ဂုဏ်ယူနေတော့တယ်.. အရေးကောင်းသလို အတွေးလည်း အရမ်းကောင်းတဲ့အန်တီကေပဲ..
သုတတွေအများကြီးပေးသွားတယ်.. ရသလည်းပျောက်မသွားဘူး.. လေးစားပါတယ်
ဘုရားရေ- ဒပ်ဗလင် မှာ တယောက်နဲ့ တယောက်တောင် ချကြရအောင်တောင်..ဆိုးတဲ့သူက..ဆိုးတယ်တဲ့။ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ။ ဒီလောက်တောင် ပြည်သူ့ မျက်နှာ ကြည့် တဲ့ အကျိုးနဲ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတွေ အတွက်..စိမ်းတဲ့မြေရေ.. နင် မငိုနဲ့တော့..။
အားလုံးဖတ်ပြီးမှ ဒီနောက်ဆုံး စာကြောင်းလေးကို ဖတ်
ပြီး သဘောကျသွားပါတယ် မကေရေ
တော်ကြာ စိမ်းတဲ့မြေရဲ့ အငို စကွဲ (နှစ်ထပ်ကွမ်း) တွေ
မင်္ဂလာပါဗျာ ၊၊ စာလာဖတ်ပါတယ် အစ်မ K.
ဖတ်ပြီးတော့ မောသွားတယ် အစ်မရေ ။
တစ်ခန်းစီပြောင်းနေတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေထဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ဇာတ်ကောင်ဖြစ်နေကြမှန်းမသိဘဲ ကပြအသုံးတော်ခံနေကြ ။
လောကကြီးတဲ့လား . . .
ဟင်း . . . ခေါင်းစားတယ် ။
လာဖတ်တယ် ကေ.. အရေးလေးတွေ နှစ်သက်တယ်။ လူကိုလဲ နှစ်သက်ပါတယ်။
င်္တီကေ့ စိတ်ကူးလေးတွေက နုညံ့တယ် စာဖတ်ရင်း စာရေးသူရဲ့စိတ်ကို မှန်းလို့တယ်နော့် အတွေးလေးတွေနဲ့ ဗဟုသုတရ စရာလေးတွေ ကိုယ်တိုင် ရထားအတူလိုက်စီးလိုက်ရသလို ဘောက်ထဲက စာတစ်ချို့ကိုလည်း သေချာဖတ်မှတ်သွားပါတယ် ။အများကြီးမတွေးသွားဘူးနော် အရွယ်ကျလို့း)
ဒပ်ဗလင် ၊ ဆံပင် အမဲတွေ သိပ်မကျန်တော့ဘူး နှင့် မကေ ရထား စီးသော ညများ...... ဟူး.. မော ..တယ်...ဗျာ.....။
ဒပ်ဗလင် ညီလာခံက သိုးတွေရဲ့ conference မဟုတ်ဖူးလေ။ဟား၊ဟား၊ဟား၊
အစ်မရေ transparency ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို ကျောင်းက Political Analysis ဘာသာမှာ သင်ရတိုင်း ကိုယ့်အစိုးရကိုပြေးမြင်မိအောင်ကို အစွမ်းကြီးတာ။ အစ်မရဲ့ စိမ်းတဲ့မြေ ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကတကယ်ထိတယ်။
စင်္ကာပူမှာ ကလိုရင်းနံ့ပြင်းတဲ့ရေကိုသောက်ရတိုင်း ကိုယ့်ဆီကသဲခံတဲ့ ရေအေးအေးလေးကိုလွမ်းရတာ ကြောင့်ရေးဖြစ်တဲ့ကဗျာလေ။
ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ မကေမှာ မှော် လက် ရှိနေတာ သေချာပြီ။ : )
မကေ ရေးသမျှ ပထမဆုံးစာကြောင်းကနေ စလို့ အဆုံးထိကို ခေါ်သွားလိုက်တာ အမြဲရင်သပ်ရှုမောပဲ။
ဗဟုသုတလည်းရတယ်။ သုတကိုပေးပေမယ့် ရေးတဲ့ စတိုင်လ်က ရသ ဖွဲ့သလိုမျိုးလေး..ဘယ်လိုလေးလဲ မသိဘူး။ တစ်မျိုးလေးပဲ။
ကေ့ ဘေးမှာထိုင်ပြီး ကေ နဲ့ အတူတူ ရထား လိုက်စီးသွားပါတယ်...။
၇ နာရီနီးပါး စီးပြီးတော့ မောလို့ အိပ်မယ်ကြံရုံရှိသေး မီးရောင်ပြပြနဲ့သွားရမယ့်မြို့ကြီးကို မြင်နေရပြီ...။
ဘ၀ခရီးကတော့ ရထားလမ်းကလေး မဆုံးမချင်း ဆက်သွားနေရအုံးမည်သာ...
အစအဆုံးဆွဲခေါ်သွားလိုက်တာ ရထားကြီးနဲ့ လိုက်ပါနေရသလိုပါပဲ..
အတွေးတွေ၊ အရေးတွေ၊ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေအတွက် လေးစားမိပါတယ်..
သြော်- ကဗျာဆရာတွေကတော့..စမ်းကလေးတွေ စီးဆင်းနေတာပဲ မြင်ချင်မှာပေါ့လေ။ မောရင်လည်း လျှောက်မလိုက်နဲ့လေ.. ကိုယ့်ဖာသာ ကဗျာစပ်နေပေါ့။း)
မချိုသင်းကလည်း..ဒီလိုသိုးမဟုတ်ပါဘူး။ မချိုသင်းက..ယုန်ကလေးပါ။ ချစ်စရာ-ယုန်ဝတုတ်လေး။း)
Craton, Republic - ကျေးဇူးး)
ကိုဆောင်းယွန်းလ- အငိုက.. စကွဲ မကတော့ဘူး.. root တွေပါ တင်ရတော့မယ်။
မနော်- ဆံပင်မြန်မြန်ဖြူမှ..ပင်ရှင်နာ လက်မှတ်နဲ့ ရထားတူတူ စီးမယ်လေ။ လာခဲ့-
သန့်- စားတဲ့အခါလည်းစားပေါ့နော်။း)
သိုးကလေးရဲ့မမကြီး ခင်ဦးမေ ရေ- မချိုသင်းလို ယုန်မမကြီးပဲလုပ်ပါ။
မောင်မျိုး- ဖုန်းမြင့်- ဒုတ်ခပါပဲ..တို့စာက..အဲလောက်တောင်.. စိတ်ညစ်စရာကောင်းနေပြီလား။
၀ိဇ္ဖာ- ဘာပြောလိုက်တာလဲ..မကြားလိုက်လို့..း)
မေ့သမီးရဲ့ ကဗျာလေးကို သဘောကျသွားတယ်။ Newater တွေသောက်ပေါ့။း) ဒီနေ့ မေ့သမီးဆီမှာ အရှည်ကြီး မန့်ခဲ့တယ်။
ဟနရေ- မှော်လား..မှိုလားဟင်..လက်သဲမှာ တခါတော့..မှိုကပ်ဖူးတယ်။း)
သက်ဝေလည်း ရထားအတူစီးချင်ရင်..ပင်ရှင်နာ လတ်မှတ်ရမှ လာခဲ့..။ မနော်နဲ့အတူ-း)
မကေ...ရဲ့ စာတိုင်း ကို သဘော ကျခဲ့ တယ်..
စိတ်ကူးတွေ ကို ပုံ ဖေါ်တဲ့ အတတ်ပညာ..
ကိုယ့် ခံယူချက်တွေ ကို..မျှဝေပေးသွား တဲ့ အနုပညာ...
အဆိပ် အတောက် ကင်းကင်း နဲ့ လှပအောင် ချယ်မှုန်းနီုင်စွမ်းလှ တဲ့..စွမ်း အားတွေ...
အကြောင်း အရာ တစ်ခု ကို ပဲ..လူတစ်ကာ မတွေး တဲ့..မမြင်နိုင် တဲ့ ရှုထောင့် ကနေ....ရှင်းရှင်း လင်းလင်း
တွေးတော..တင်ပြ သွား တတ်တာတွေ...
ပွားစေ တဲ့ အတဲ့...အတွက်...အရမ်းလဲ အားကျခဲ့ တယ်..တို့တွေ လို သာမန် စာဖတ်သူ တွေ အတွက်..တကယ် တန်ဖိုး ရှိတဲ့ စာတွေ ပါ....
ဒါပေမဲ့....အမှန် အတိုင်း ၀န်ခံ ရရင်...မကေ စာတွေ ဖတ်ပြီးသွားတိုင်း...စာလေး ဘာလေး ရေးကြည့်မလား...လို့ ကူးမိတဲ့ စိတ်တွေ...အားတွေ ကုန်ခမ်း ပျာက် ဆုံး သွား တတ်ပြီး....တကယ်ငယ်ငယ် သွား ပြန်ရော.....ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိနေတာ ကိုး...း).....ကိုယ် က ဘယ်အနား မှာ...ဘယ် အဆင့်မှာ..လဲ ဆိုတာ......
အဲဒါ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံ တာ...နော်...း).....
အပေါ်မှာ..စာလုံးပေါင်း မှား သွားလို့.....
ဒါပေမဲ့....အမှန် အတိုင်း ၀န်ခံ ရရင်...မကေ စာတွေ ဖတ်ပြီးသွားတိုင်း...စာလေး ဘာလေး ရေးကြည့်မလား...လို့ ကူးမိတဲ့ စိတ်တွေ...အားတွေ ကုန်ခမ်း ပျာက် ဆုံး သွား တတ်ပြီး....တကယ်အားငယ်မိတယ်.....ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိနေတာ ကိုး...း).....ကိုယ် က ဘယ်အနား မှာ...ဘယ် အဆင့်မှာ..လဲ ဆိုတာ......
ကောင်းတယ်ဗျာ။ လူတွေအကုန်လုံး တစ်ခေါင်းလုံးဖြူချင်ဖြူပါစေတော့။ ဒါမျိုးလေးတွေ ထပ်မျှော်နေမယ်ဗျာ။ လူကိုလူလို့ လူတွေ မြင်နိုင်တဲ့ခေတ် ခုထိ မရောက်သေးဘူး။း-(
ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးမှာ ချမ်းသာတဲ့သူတွေ ပညာတတ်တွေ တတ်/သိပညာရှင်တွေက တိုင်းပြည်မျက်နှာ ကြည့်ပြီး လူထုရှိရာ ဆင်းရဲတွင်းထဲ ခုန်ခုန်ချတယ်လို့ ဖတ်မှတ်ဖူးတယ်၊ မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲမှာ ပြည်ပရောက် အချို့ကတော့ တိုင်းပြည် မျက်နှာမငဲ့တော့ပဲ ဆင်းရဲတွင်းကနေ အိတ်ကြီးဖေါင်းလာပြီး ဒပ်ဗလင်မှာ နေရာအတွက် ပရိုပိုဇယ်အတွက် ...အတွက်တွေ များများတွက်ပြီး သတ်ကုန်ကြတာ ဗိုလ်ချုပ်များသိရင် ရင်၂ခြမ်း ဗြန်းဗြန်းကွဲလေ မလား? မသိ
မမသီရိရေ- အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ ဘလော့ရေးတယ်ဆိုတာ..အားလုံး ဝေမျှ စားသုံး ပျော်ရွှင်ကြတာပဲ။ ဒီနေ့တောင် ကိုငြိမ်းဝေ ဘလော့မှာ မင်းသုဝဏ်ကဗျာလေး တွေ့လိုက်တယ်.. အတွေးအခေါ်ဟူသမျှ ပြိုင်ကြပါစေ..ပန်းဟူသမျှ လှိုင်ကြပါစေ..တဲ့။
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်လည်း.. လာလည်တာ ၀မ်းသာပါတယ်။
ကောင်းကင်ကို- ကွန်ပြူတာ စကရင်းပေါ်တွင်မျှော်..း)
မနန်ဝါဒူကဘာ- အခုလဲ ရှိတဲ့လူတွေ ရင်ကွဲနေရတာပဲ..
ကေရေ… အရင်က မနက်ဖက်ဆို အလကားရတဲ့ တူဒေးသတင်းစာလေးနဲ့ဟိုဒင်းဟိုဟာ လုပ်နေကျ… ဒါပေမယ့် ဖတ်ရတဲ့သတင်းတွေက မနက်ခင်းနဲ့ မလိုက်ဖက်လို့ခုတော့ ရွှေအမြုတေနဲ့ ပဲ ဟိုဒင်းဟိုဟာလုပ်တော့တယ်… ရထားလေးတစင်းနဲ့ အတူ ကေရဲ့ အတွေးတွေထဲ တို့ ပါလိုက်ပါသွားတယ်… အဲဒါကေပေါ့…
ဘာလို့လဲ မသိဘူးကေ... ဖတ်ရင်းနဲ့ ခဏခဏ မျက်ရည်လည်နေတယ်။ ကေနဲ့အတူ ရထားစီးရင်း စိမ်းတဲ့မြေဆီက ရထားလမ်းတလျှောက်ကို သတိရလာလို့ပဲ ထင်ပါရဲ့..။
ရထားစီးရရင်း စာရေးသွားတာ ကောင်းလိုက်တာ... အားကျတယ်။ ခေါင်းစားတာတွေ မတွေးဘဲ ရှုခင်းလေးတွေ ငေး၊ ကော်ဖီသောက်၊ စာအုပ်လေးဖတ် နောက်တခါ လုပ်ပေါ့နော်။ နောက်ပို့စ် အတွက်လေ
မမေငြိမ်းရေ- ခုချိန်ဆို ပိုလွမ်းနေမှာ သိတယ်။
မီယာ- ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေ ရေးနိုင်ဖို့ မိုးပျံဘူဘောင်း တတွဲလောက် ၀ယ်လိုက်အုံးမယ်..ဟဲ..လာမယ်နော်-